China Automatic Soldering Machine Amin'ny Ccd (R351C) mpanamboatra sy ny mpamatsy | RuiChi
Automatic Soldering Machine Amin'ny Ccd (R351C)
• Miaraka amin'ny fakan-tsary ho an'ny marina tsara CCD toerany
• Compact sy mafy orina rafitra
• 12-mirefy LCD mikasika efijery
• 2.4G Wireless lavitra fanaraha-maso (3 in 1)
• PC fanaraha-maso + tena mandroso ny varavarankely OS
• 400W / 600W solder heater amin'ny fifadian-kanina hafanana sitrana
• tamin'ny taona & RoHs mifanaraka tsara
famaky 5-mpiray (X / Y / Z / R / tariby feeder)
Fitaovana Travel (X / Y / Z / R) * 350 * 350 * 330 ° 100mm
Max nihazakazaka haingana (X / Y / Z / R) X / Y / Z: 0-600mm / s R: 180 ° / s
Avereno toerany araka ny marina ± 0.02mm
Program peo fahaizany manam-petra
Display maody 12 "LCD mikasika efijery
System sehatra Windows 7 OS matihanina
Programming fomba Mikasika Screen + Wireless Remote
Motion rafitra Stepper maotera
Temperature Range 180 ℃ ~ 450 ℃
Soldering tariby rafitra sakafo Tsy miankina fiara sy Stepper maotera
Soldering tariby famaritana 0.8-1.2mm (azo namboarina)
Min soldering sakafo halavan'ny tariby 0.1mm
Herin'aratra Single dingana 220 / 110V AC 50/60 Hz
Air fanerena 0.4-0.8MPa
Work tontolo iainana 0 - 40 ℃, Ralative Vlažnost: 20% -90%
Machine Size (MG) L600 * W594 * H848mm
• 5 mpiray (X, Y, Z, R sy ny 1 soldering tariby sakafo rafitra).
• Self-mandroso rindrankajy eo ambany varavarankely 7 anglisy OS ho mora fandidiana sy ny fampiofanana.
• Real digitalized rindrambaiko amin'ny 2.4G Wireless fanaraha-maso lavitra, totozy sy ny fitendry.
• 12 mirefy Full Touch LCD lamba.
• Manokana marika 400W na 600W (tsy voatery) matetika ambony rafitra fanafanana amin'ny fanarenana haingana hafanana.
• Soldering tendron'ny mora niova, hidin-trano miantoka ny toerana tsy miova rehefa avy fiovana tendron'i vaovao.
• Velomy-tariby solder firapotsy mandeha ho azy dia afaka mampihena ny vifotsy feeder namely mba tsy marary mitsika itoerany PCB, azo antoka soldering toetra avy amin'ny niaviany.
• manontolo soldering andian-dahatsoratra fitsipika milina mifanaraka amin'ny taona sy ny RoHs mifanaraka tsara.
1.Advanced famolavolana, tsara tarehy amin'ny endrika ambonin'ny manokana hoso-doko. Mitovy habe amin'ny ankapobeny, fa mitarika ho amin'ny tsara kokoa mandaitra tapaka lalan-dra.
2.User-namana fandaharana sy ny asa miaraka amin'ny rindrankajy mandroso tena mifototra amin'ny varavarankely 7 asa rafitra. Fotoana iray dia afaka mampiditra fanovana didy na mamafa amin'ny hafa mitovy isa ho fomba mahomby sy mahomby fandidiana.
3.Digitized fandaharana, niditra mivantana mba hanova ny masontsivana. 12 "mikasika efijery feno dia mampiseho ny lalana mandeha ary manao ny dingana hita maso.
4.Starting solder tariby sakafo amin'ny fotoana rehetra, fihaonana isan-karazany sy ny dingana soldering nihazakazaka avo fahombiazana.
5.Access fanaraha-maso mba tsy disoperation modely.
6.Parameter ny soldering hevitra karazana afaka hamindra flexibly. Ny nihazakazaka haingana ny teboka tsirairay solder azo nametraka misaraka eo amin'ny teboka solder manontolo fampifanarahana.
7.Machine amin'ny asa mba hanitsy izany avo amin'ny Z-mpiray tari-dalana, ary ny hafa dia azo ahitsy zoro aorian'ny repositioned bobongolo.
8.Double-rail rafitra ho an'ny X, Y sy Z famaky, izay mampitombo ny fahamarinan-toerana nandritra ny hetsika ny milina. Mandritra izany fotoana izany, ny tena fototra mihetsika faritra, toy ny fanaraha-maso ny rafitra, Motors, inverters, sns, fampiasana tsara nohafarana marika amin'ny fampisehoana.
9.Break-tariby solder firapotsy mandeha ho azy dia afaka mampihena firapotsy feeder vaky izay marary mitsika cuases itoerany soldering PCB rehefa eo ambany hafanana avo mba hanatsarana ny kalitaon'ny soldering.
10.The zafindohalika, welding loham amin'ny fametrahana mazava tsara cylinders sy in-toerana sy ny zoro fanitsiana cushioning rafitra mba hahatonga ny vokany soldering tonga lafatra.
RuiChi soldering milina rafitra asa dia mifototra amin'ny varavarankely 7 OS sy mampiasa PC ho an'ny controling, izay fifadian-kanina sy mafy orina.
Ny tombontsoa indrindra dia ny mpampiasa dia tena tsotra interface tsara ary afaka manatsara ny fahaiza-pahombiazana ny famokarana; Mandeha haingana ny hevitra rehetra azo nametraka tsirairay.
Ny milina dia tonga dia manao kajy ny napetraka runtime ny mitsara raha toa ka mila fanitsiana ilaina mba hahazoana antoka ny malamalama nifamoivoy sy ho maro ny fiainan 'ny milina!
RuiChi mahay asa soldering rafitra fitantanana dia mamela ny fahefana hafa, izay mety ho an'ny hafa voafetra mitantana.
Ternary endrika mandeha ho azy soldering sakafo sy ny vifotsy mialoha fanafanana.
Drag Soldering fametrahana
Mety hilaza ny olona tarihiny soldering na andalana soldering, ny mety ho an'ny sasany fitsipika mitovy na duplicated soldering toerana.
Matrix Soldering Ny fametrahana
R351C milina mandeha ho azy soldering afaka ho teraka soldering bahoaka sy izay mety ho teraka soldering toerana.
fikirana miverina indroa
Smart soldering OS mamela ny angona dika mitovy amin'ny PC hafa na asa hafa-peo.
Fikirana rakitra tsirairay vokatra ho an'ny hafa.
Next: Double Head tsaina Soldering Robot (R351DH)
Fifandraisana Touch Screen
12-mirefy HD mikasika efijery fandidiana lehibe interface tsara, nipaipaika ny miasa fotsiny soldering ity milina sy fanaraha-maso ny fihetsehan'ny mamantatra rehetra mba hampandeha tsara soldering milina miasa.
Induction avo matetika amin'ny fanafanana rafitra fanaraha-maso mikasika efijery tontonana, paompy fotsiny ny hafanana toerana. Zava-baovao mari-pana solder algorithm mahatonga mari-pana sitrana haingana mba hahazoana antoka soldering hamorona milina tonga lafatra soldering.
1.Soldering loha no fanalahidy anisan'ny singa soldering robot.Its vainafo mampiasa ny fitaovana coil volafotsy.
2.And induction soldering karazana fanafanana tendron'ny ravin mahatonga ny hafainganam-pandehan'ny tena fast.The hafanana miverina eo amin'ny fahavitany solder-tsiny ho amin'ny manaraka.
3.With ny 330 degre fihodinan'ny mpiray, R351 milina mety ho an'ny hafa indrindra zoro ny welding vokatra.
1.High marina tsara soldering tariby synchronize sakafo anjara asa amin'ny alalan'ny soldering OS mahay mitondra fiara, izay mety hahatratra 0.1mm sakafo araka ny marina.
2.Wire tevika kodiarana dingana mialoha ny soldering vifotsy mba hamela soldering tendron'ny ravin mahazo vifotsy haingana kokoa, izay tena manan-danja ho an'ny fanatsarana ny kalitaon'ny soldering.
Free hanao ny mari tsy manam-paharoa ho an'ny tsirairay soldering tendron'ny mpanjifa. Raha oharina amin'ny hafa soldering soso-kevitra, toro-hevitra Siantifika natao hanampy hamonjy ny 1/4 1/5 solder tin, izay tsara indrindra ho an'ny hafa ampiasaina fikarohana manokana na hampitombo ny tanjona.
Soso-kevitra Soldering Cleaning
1.The soldering lohany, dia tonga dia hiverina ho nanadio ny rivotra rehefa avy nahavita ny soldering toerana izay fikirana teo amin'ny fandaharana.
2.The nanadio soldering lohany dia hanampy foana soldering tsara kalitao.
1.Standard fixture ho nalefa miaraka soldering milina.
2.Customized fixture azo natao araka ny mpanjifa ny fepetra.
Ataovy miavaka Fixture
1.Standard fixture ho nandray miaraka amin'ny milina.
Ny fanaraha-maso rehetra singa, anisan'izany ny orinasa PC, mpamily ny stepper maotera ho an'ny mpiray XYZR, mihetsika-maso, fiarovana ny faritra, rivotra varingarina-maso, maso sns fahefana nametraka fototra mafy izany ilay takela.
Ny ny vatana ny mandeha ho azy soldering milina.
1.USB seranan-tsambo sy LAN - mialoha famolavolana ny fanavaozam-baovao sy ny taranaka ny fidirana amin'ny famokarana hafa andalana, izany dia milina izay sahaza kokoa ho an'ny indostria fampiasana.
2.Please ho azo antoka ny ESD seranan-tsambo dia milina mifandray rehefa miasa.
Ny fanaraha-maso Wireless accesses lavitra indrindra avy amin'ny asa fanaraha-maso indostrialy PCs, izay manampy anao bebe kokoa ny fandaharam-potoana amin'ny mora kokoa welding robot.
CCD toerana tsara rafitra afaka manatsara ny toerana fametrahana mazava tsara sy araka ny marina avereno toerany.
Début STOP reset Emergency Stop
Samihafa Applications Of Automatic Soldering Robot
Automatic Soldering Fa Earphone
Ho an'ireo vokatra tsotra fa amin'ny kely habeny, soldering milina nanampy fitsipika fixture mba hahazoana antoka ny vokany soldering afa-po.
Nitondra Light Soldering
Hazavana LED indostria dia fitaovana toetr'andro tany am-boalohany izany milina mandeha ho azy soldering.
Ny milina mandeha ho azy welding R351C mitantana stably amin'ny fitomboan'ny mafy samy hafa PCB votoatiny, welding amin'ny banga kely haingana tsy misy fahavoazana.
Fa firaka-soldering malalaka ny orinasa goavana tariby soldering, matanjaka kokoa solder mpiray azo naorina.
Flash kapila USB Soldering
Io modely ny R351C welding milina azo ampiasaina ho an'ny hafa elektronika soldering, famoronana manodidina sy ny tonon-taolana solder tonga lafatra ho an'ny avo lenta ny flash USB fitadidiana. Tsy manolotra toro-hevitra ho an'ny hafa OEM vokatra.
Miaramila Products PCB Soldering
Ny tena fametrahana mazava tsara ny miaramila sy ny tinady vokatra fiaramanidina tsara indrindra mangataka ny dingana soldering, R351C soldering asa milina maro ny karazana orinasa.
Fifantenana Soldering Robot
In-dalana, Insert Robot (RF331AI)
R351C tsaina Soldering Robot Amin'ny CCD Pos ...
Standard tsaina Soldering Robot R501
Dual Soldering Head Soldering Machine (R501DH)
Automatic Soldering Machine Amin'ny Safety Grid (R ...
tsaina Screwdriving Machine , Automatic Soldering Robot , Fifantenana Soldering Robot , Smart Soldering Robot , Soldering Robot , Automatic PVC Window Production-dalana ,